Budata Ring Mania APK maka Android
Budata Ring Mania
Budata Ring Mania,
Ring Mania bụ egwuregwu mkpanaka ebe anyị na-agbalị ịchọta mgbanaka furu efu na ụwa anwansi nke dị nokpuru mmiri ebe ụdị ihe dị iche iche bi. Nime egwuregwu ahụ, nke dị maka nbudata nefu na ikpo okwu gam akporo, anyị na-abanye na njem nke ịchọta mgbanaka furu efu na ala nke oké osimiri ma na-anakọta ha na osisi anwansi.
Negwuregwu ahụ nke na-egosipụta ụwa dị nokpuru mmiri na-egbuke egbuke, anyị na-agbalị ijikọta mgbanaka agba dị iche iche notu osisi anwansi. Anyị na-eji bọtịnụ abụọ etinyere na ala ihuenyo ahụ iji kpokọta mgbanaka gbasasịrị noké osimiri. Enwere m ike ịsị na iburu mgbanaka na mmanya bụ ihe gbasara ndidi.
Enwekwara ụdịdị dị iche iche na egwuregwu mmiri dị nokpuru, nke gụnyere ihe karịrị ọkwa 50 na-aga nihu site na mfe ruo nike. Mgbagwoju niile dị iche iche, nke agba dị mkpa, na-atọ ụtọ ma mee ka ị chefuo otú oge na-aga.
Ring Mania Ụdịdị
Mmepụta: Invictus Games Ltd.